सिमानामा हतियार सहित पुग्याे शशस्त्र प्रहरी, भारतिय सेनाकाे भागाभाग, माेदी नै थर्कमान – Cn Chautari
सीमामा पर्ने दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ लप्चीस्थित कोर्लाङपारिको ५७ नम्बर सीमा स्तम्भ भेटिएको छ ।सीमा स्तम्भ नभेटिँदा अन्यौलको स्थिति भइरहेको बेला स्थानीयले पुरानै ठाउँमा सीमा स्तम्भ फेला पारेका हुन् ।
यो सीमा स्तम्भ चिनियाँ पक्षले सारेर नेपाली भूभाग मिचेको भनी विवाद हुँदै आएको छ ।विगू गाउँपालिका वडा नं. १(साविक लामाबगर गाविस) का वडाध्यक्ष हिरण्यबहादुर गुरुङ सहितको टोलीले सीमाना पुगेर सीमा स्तम्भ फेला पारेको हो ।
लप्चीबाट सीमा स्तम्भबारे जानकारी पाएका स्थानीयलाई लिएर २ दिनमा लप्ची गाउँबाट ५७ नं. पिलर पुगेको उनले बताए ।गत वैशाख अन्तिममा त्यहाँ पुग्दा हिउँले ढाकिएको थियो । कोर्लाङपारी डाँडामा पुगेर हिउँले ढाकिएको ठाउँ खोतल्दा ।
चटरटानमै खोपेर ५७ नं. २०१९ लेखिएको सीमा स्तम्भ फेला परेको वडा अध्यक्ष गुरुङले बताए । स्थानीयले २०१९ सालमा नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले गाडेको सीमा स्तम्भ यही भएको दाबी गरेका छन् ।
राज्यको कुनै पनि संयन्त्रको उपस्थिति नहुने लप्चीमा चिनीया अधिकारीहरु बेलाबेलामा आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । हराए को भनिएको सीमा स्तम्भ नदेखाउन चिनीयाँ पक्षले लप्ची बासीलाई धम्की समेत दिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
चिनीया पक्ष को धम्कीकै कारण स्थानीयले नेपाली पक्षलाई स्तम्भ देखाउन नमान्दा पटक पटकको आफ्नो अनुरोधपछि मात्र स्थानी यले आफूलाई सीमा स्तम्भ देखाएको वडा अध्यक्ष गुरुङले जान कारी दिए ।
लप्ची गाउँबाट विहानै सीमा खोजीका लागि हिँडेको टोली बीचमै रात विताएर भोली पल्ट ९ बजेतिर मात्र सीमाना पुगेको थियो । टोलीले २०१९ साल (सन् १९६३) मा निर्माण गरिएको सो स्तम्भ फेला पारेको हो ।
२०१९ सालमा निर्माण गरिएको स्थान कोर्लाङपारिको टुप्पोबाट फेदमा सारिएको रिपोर्ट नापी विभाग हुँदै सरकारलाई बुझाएको थियो । स्तम्भ नभेटेपछि सीमा मिचिएको भन्दै उक्त सीमा स्तम्भ पुरानै अवस्थितिमा लैजान सरकारले चिनियाँ पक्षसँग अडान राख्दै आएको छ ।
ढुंगामा कुँदेर दुवै देशको नाम लेखेर बनाइएको सीमा स्तम्भ कोर्लाङ पारिको टुप्पोमा फेला पा¥यौं,” वडा अध्यक्ष गुरुङले कारोबारसँग भने, “सीमागाउँ लप्चीबाट त्यहाँ पुगेर ३ दिनमा तल आइपुगियो ।
बीचमा आफैंले बोकेका खानेकुरा खाएर टेण्टमा बसेर फर्कियौं ।” सीमा स्तम्भ खोजीमा विगू गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जिव ओलीले नेतृत्व गरेर गएता पनि खराब मौसम र कठिन भूगोलका कारण अरु लप्चीगाउँमै बसेका थिए ।
Prev‘केपि बा आउ देश बचाउ’ भन्दै पुरै देश मेरो पक्षमा छ, अबको निर्वाचनमा हामी बहुमतसहित फेरी सरकारमा आउछौं : ओली
Nextएकाबिहानै भाला तरबार बोकेर mcc विरुद्ध पूर्बसैनिक कमाण्डर सहित लाखौ युबालेघेरे बालुवाटर भयो भागाभाग|
भर्खरै जाजरकोटमा भ्रष्टाचारि लाई जनताले यस्तो सम्म गरे, जनता जागे पछि यस्तो सम्म हुन्छ आफै हेर्नुस्
महाकालीको पुल र डडेल्धुराको बाटो देखाए एमालेले चुनाव जित्छ: ओली